မွေးဖွားပြီးခါစချာ့ခ်ျ - ဆွစ်ဇာလန်၏ကမ္ဘာချီဘုရားရှိခိုးကျောင်း
ကြှနျုပျတို့အကွောငျး > အဆိုပါ WCG ၏နောက်ခံသမိုင်း > တစ်ဦးကဘုရားကျောင်းပြန်လည်မွေးဖွား
လွန်ခဲ့သော ၁၅ နှစ်တာကာလအတွင်းဘုရားသခင့်သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပတ် ၀ န်းကျင်၊ အထူးသဖြင့်အခြားခရစ်ယာန်များအားအစဉ်အလာနားလည်မှု၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏တည်ထောင်သူဟားဘတ်ဒဗလျူအမ်စထရောင်းသေဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းပြောင်းလဲမှုအတိုင်းအတာနှင့်အမြန်နှုန်းသည်ထောက်ခံသူများနှင့်ပြိုင်ဘက်များကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရသောအရာများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောအရာများကိုရပ်တန့်ပြီးကြည့်သင့်သည်။
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုတရား ၀ င်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊ ဗြိတိန်နှင့်ယူအက်စ်တို့သည်အစ္စရေးလူမျိုးတို့၏ဗြိတိသျှအစ္စရေးတို့၏သားစဉ်မြေးဆက်များဖြစ်သည်ဟူသောကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ချက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာရေးအသိုင်းအ ၀ ိုင်းသည်ဘုရားသခင်နှင့်သီးသန့်ဆက်ဆံရေးရှိရန်အခိုင်အမာဆိုသောကျွန်ုပ်တို့၏စွဲလမ်းမှုပျောက်ကွယ်သွားပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာ၊ အလှကုန်ပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အီစတာနှင့်ခရစ်စမတ်ကဲ့သို့သောရိုးရာခရစ်ယာန်အားလပ်ရက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ပြစ်တင်ရှုတ်ချမှုများသည်ပျောက်ကွယ်သွားပြီဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည်လူများစွာမွေးဖွားနိုင်သည့်မရေမတွက်နိုင်သော ၀ ိညာဉ်များမိသားစုဖြစ်သည်ဟူသောကျွန်ုပ်တို့၏ကြာမြင့်စွာကတည်းကရှုမြင်ချက်ကိုငြင်းပယ်လိုက်သည်၊ ထာဝရသုံးပါး၊ ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ ။
Mein Vater artikulierte gegenüber der Kirche die auf der Schrift beruhende Lehre, dass Christen unter dem Neuen Bund sind, nicht dem Alten. Diese Lehre führte dazu, dass wir frühere Erfordernisse aufgaben - dass Christen den Sabbat am siebten Tag als heilige Zeit halten, dass Christen verpflichtet sind, die jährlichen, dem Volk in 3. နှင့် 5. Mose befohlenen jährlichen Festtage zu halten, dass Christen verpflichtet sind, einen dreifachen Zehnten zu geben, und dass Christen Speisen nicht essen dürfen, die unter dem Alten Bund als unrein galten.
ဒီပြောင်းလဲမှုအားလုံးဟာဆယ်နှစ်အတွင်းမှာပဲလား။ အနည်းဆုံးဓမ္မသစ်ကျမ်းဘုရားရှိခိုးကျောင်းများ မှစ၍ ဤပမာဏအတိုင်းအတာကိုအကြီးအကျယ်ပြင်ဆင်ခြင်းသည်သမိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲမရှိကြောင်းများစွာသောသူတို့ကယခုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးလျက်ရှိသည်။
ဘုရားသခင့်ကရုဏာတော်ကိုကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှခေါင်းဆောင်များနှင့်သစ္စာရှိသူများကကျွန်ုပ်တို့အားအလင်းထဲသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုးတက်မှုကိုကုန်ကျစရိတ်မပါဘဲမဖြစ်ခဲ့ပါ။ ၀ င်ငွေကျဆင်းလာတယ်၊ ငါတို့ဒေါ်လာသန်းချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်၊ ရာပေါင်းများစွာသောရေရှည် ၀ န်ထမ်းတွေကိုအလုပ်ထုတ်ပစ်ခဲ့ရတယ်။ အဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်လျော့နည်းသွားသည်။ အုပ်စုများစွာကအစောပိုင်းအယူဝါဒသို့မဟုတ်ယဉ်ကျေးမှုအနေအထားသို့ပြန်သွားရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုထားခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်မိသားစုများကွဲကွာသွားပြီးသူငယ်ချင်းများကိုစွန့်ခွာထွက်ခွါရသည်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအလွန်ဝမ်းနည်းစေပြီးဘုရားသခင်သည်ပြန်လည်ကျန်းမာသောအနာကိုငြိမ်းစေတော်မူရန်ဆုတောင်းပါ။
အသင်းဝင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ချက်အသစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာကြေငြာချက်ပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်သလိုအသင်းသားများသည်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ချက်အသစ်များကိုအလိုအလျောက်လက်ခံရန်မလိုအပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ရန်လိုအပ်ကြောင်းအလေးအနက်ပြောကြားခဲ့ပြီးဓမ္မဆရာများနှင့်အသင်းသားများအပေါ်စိတ်ရှည်သည်းခံရန်နှင့်သူတို့၏အခက်အခဲများကိုနားလည်ရန်နှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကိုနားလည်ရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။
Trotz der materiellen Verluste haben wir viel gewonnen. Wie Paulus schrieb, was immer in dem, was wir früher vertraten, für uns ein Gewinn war, das erachten wir jetzt für Schaden um Christi willen. Wir finden Ermutigung und Trost indem wir Christus und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden erkennen, und so seinem Tode gleichgestaltet werden und zur Auferstehung von den Toten gelangen (Philipper 3,7-11) ။
ငါတို့နှင့်အတူမိတ်သဟာယလက်ကိုဆန့်ခဲ့ကြသူ Pazusa ပစိဖိတ်တက္ကသိုလ်, Fuller ဘာသာရေး Seminary မှာ, Regent ကောလိပ်နှင့်အခြားသူများ - ဤ Hank Hanegraaff, Ruth Tucker, David Neff, William G. Brafford နှင့်အခြားခရစ်ယာန်ချင်းများအားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ယေရှုခရစ်နောက်သို့လိုက်ရန်စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ရှာဖွေပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သေးငယ်သောသီးသန့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ဘဲခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာ၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအသိုင်းအဝိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးယေရှုခရစ်၏ the ၀ ံဂေလိတရားကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အစွမ်းရှိသမျှဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ကောင်းချီးများကိုကျွန်ုပ်တို့ချီးကျူးသည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးနှင့်မျှဝေဖို့။
ကျွန်တော့်အဖေဂျိုးဇက်ဒ။ တီချ်သည်သမ္မာကျမ်းစာအမှန်တရားကိုမိမိကိုယ်ကိုလက်အောက်ခံခဲ့သည်။ အတိုက်အခံများကြားတွင်ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်သည်ဟုသူအခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့သည်။ သူသည်ယေရှုခရစ်၏နှိမ့် ချ၍ သစ္စာရှိကျေးကျွန်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးဘုရားသခင်နှင့်သူ၏ဘုရားသခင့်ကျေးဇူးတော်ကြွယ်ဝမှုသို့ဘုရားသခင်နှင့်ကမ္ဘာချီဘုရားရှိခိုးကျောင်းကို ဦး ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်စိတ်အားထက်သန်စွာဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုအားကိုးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယေရှုခရစ်လမ်းပြတော်မူသောလမ်းစဉ်ကိုစိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့လိုက်လျှောက်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။